सुन्दर चित्रले सजिएको चित्रपुर ! - Thoskhabar
सुन्दर चित्रले सजिएको चित्रपुर !
गाउँको चारैतीर लटरम्म फलेको आपँको बगैँचा । बगौँचामा रंगीबिरंगी चराचुरुंगीले दृष्य मनमोहक छ । बगैंचासँगै बाँस, सिमल, पिपल, सिसौ, भिक्स लगायतका रुख विरुवाले वातावरण अझै स्वच्छ र खुलेको छ । २ लेनको चिल्ला पक्की सडकमा सरर गाडी हुँइकिदै छ । सांस्कृतिक, प्राकृतिक, धार्मिक, भाषिक तथा परम्परागत रूपमा अब्बल छ मेरो गाउँ। सुन्दर, शान्त र विविधताले भरिपुर्ण यो हो ठाउँ हो मेरो प्रिय गाउँ चित्रपुर ।
जुन जनकपुरबाट करिब ३० किलोमिटर उत्तरपश्चिममा धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा पर्छ । सहरको तुलनामा जनसंख्या र सेवासुविधा अलि कम भएप्नि सौन्दर्य र विविधताले सबैको मन जित्छ। प्रदेश २ को परिवेशमा हेर्दा अन्य गाउँ तथा नगरभन्दा यहाँका धेरैजसो मानिस शिक्षित छन्। यहाँका अधिकांस मानिसले अहोरात्र परिश्रम गरेर खेती, किसानी लगायतका आफ्नो परम्परागत काम गर्छन् । गाउँको अधिकांस भागमा आँपको बगैँचा तथा रुखविरुवा लगाइएकाले थोरैमात्र जग्गामा यहाँ खेतीपाती हुन्छ ।
आँप, कटहर, लिची, अम्बा, सरिफा लगायतका फल आफ्ना आफ्नै बारीमा फलेपनि अन्य फलफुलको सन्दर्भमा भने यहाँ मानिस बजारमै आश्रित छन् । बारीमा फलाएका तरकारीले अधिकांसलाई पुगेपनि अन्नमा भने अधिकांस मानिस पर निर्भर छन् ।
खेतीपातीमै लाग्ने यस गाउँका मानिस पछिल्लो समय अन्य पेशा र व्यवसायमा समेत आफ्ना भविष्य खोज्दै छन् । र, त्यसमध्ये केहीले सफलता पनि पाएका छन् । तर रोजगारीको राम्रो अवसर नहुँदा दर्जनौ युवा विदेश पनि पलायन भएका छन् । गाउँमा खपडाको छानो भएको अधिकांस घर पक्की छन् ।
पुराना घर तोडेर धेरैजसोले धमाधम इटाको घर बनाउँदैछन् । घरघरै खानेपानीको धारा छ। घर नजिकै विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी पनि छ। सबैको घरमा चर्पी छ। अन्य ठाउँका भन्दा यहाँका मानिसको मुटु ठूलो भएर होला न कहिल्यै कुनै जातपात केन्द्रित कुरा हुन्छ न धर्म र समुदाय विशेषकै । मलाई गर्व छ चित्रपुरबासी हुनुमा ।
Previous articleबिद्युत सर्ट भएर आगलागी हुँदा बर्दिबासमा लाखौंको क्षति
Next articleबेलुका २ क्वाटर धोक्यो , अनि स्ट्याटस ठोक्यो …सरकार मूर्दाबाद !